FASAL CANAB "ALESHENKIN" - VITICULTURE
Noocyada canabka miiska waxaa lagu kala duwan yahay dhadhan fiican iyo muuqaal cajiib ah.
Waa wax aan suurtagal ahayn in la gudbiyo kooxo is bislaaday oo aan afurin afkaaga.
Iyo midabka cagaarka iyo dhadhanka cajiibka ah ee berry ballaaran ee "Alyosha" ma ka tagi doonaan cid kasta oo aan indho la'aan ah.
Canab "Aleshenkin" ayaa sidoo kale laga heli karaa magaca "Alyosha" ama "No. 328". Waxay ka mid tahay noocyada miiska iyo waa tusaale wanaagsan oo loogu talagalay viticulture, labadaba dhadhan iyo sifooyinka dibadda. Waxay asal ahaan ka soo jiidaysaa astaamaha manka ee kala duwan ee Bariga oo leh canab "Madeleine Anzhevin", oo ay ka qaadatay tiro badan oo sifooyin wanaagsan.
Burooyinka waxaa lagu gartaa koritaan xoog leh. Leaves midabka dhexdhexaad ah, midabka cagaarka ah ee madow iyo dusha sare ee dillaacsan, wuxuu ka duwan yahay noocyo kaladuwan oo ah shan foom oo shanlaydh ah. Badanaa, caleemaha wuxuu leeyahay laba nooc. Biyo-bisexual Burooyinkeeda miraha on geedka canabka ah waxaa la dhigay sanadka ilaa sanadka. Gooyntu waxay si fiican u qabataa meel cusub oo si deg deg ah u qaadataa xidid. Caleemaha waxay leeyihiin heer wanaagsan oo gaboobay, oo gacmaha canabkuna waxay leeyihiin marxalad jahwareer ah illaa 6 sano.
Kooxaha kala duwan ee badankoodu waxay leeyihiin qaab dhismeedka ahmarar dhif ah, jahwareer yar. Miisaanka waa mid aad u ballaadhan, qaar ka mid ah tijaabooyinka ayaa gaaraya laba kiilo garaam, halka miisaanka caadiga ah farabadan yahay qiyaastii 500g. Celceliska miisaankiisu waa 45 g. Vines ee midabka iftiin yar, oo leh dunta yar wax, yar yar.
Jidhku waa mid casiir leh, macaan, dhadhan fiican leh iyo dhadhan. Noocyo sonkor ah ee casiirku gaaro 20%, acidity - 7g / l. Marka loo eego cabbirka dhadhanka, qiimaha dhadhanka ee Aleshenkin ayaa gaaraya 8.8 dhibcood. Caday in canabkani wuxuu leeyahay ilaa 40% midhaha oo aan miraha lahayn.
Noocani noocan oo kale ah ayaa iska leh noocyo sarraysa. Iyada oo hal qof oo qaangaar ah oo qaangaar ah uu ururin karo ilaa 25 kg oo ah rucubyo bislaado. Si loo for geedka canabka ah si miro guul leh laga bilaabo sanad ilaa sanadka, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco dhammaan xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka ee beerta canabka ah, kuwaas oo aan ka wada hadli doonaa hoos.
Canabka "Aleshenkin" waxa loola jeedaa noocyo hore oo hore ah, muddadii uu bislaa kama badna 118 maalmood oo leh CAT ugu yaraan 2000 ° C (wadarta heerkulka firfircooni waa soo-jeedinta dhammaan celceliska heer-kulka caadiga ah ee qaybaha qaarkood ee xilli-ciyaareedka). Caadi ahaan, goosashada ayaa horay loo soo ururin karaa maalmaha ugu dambeeya ee Luulyo ilaa dhammaadka xagaaga.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee "Aleshenkin" kala duwan yihiin midho badan, dhadhanin cajiib ah, qadar yar oo abuur ah ee berry, xidid wanaagsan oo gooyn iyo ripening wanaagsan ee geedka canabka ah xitaa sanadaha xun.
Dhibaatada ugu weyn ee "Aleshenkin" noocyada kala duwan ayaa ah iska-caabbinta hooseeya ee barafka ee canab of canab, kaas oo ku yaalla dhulka hoostiisa. Taasi waa sababta noocyada noocan ah lagu talinayaa in la tallaalo kaydka dhaxanta u adkaysta. Laakiin qayb ka mid ah geedka canabka ah, oo ku yaalla dusha sare ee ciidda, waxay leedahay dulqaadka aad u sarreeya ee dhaxan xilliga qaboobaha. Burushyada caanuhu waxay leeyihiin sicir badan oo digir ah sidaa darteed waxay u baahan yihiin in lagu shaqeeyo iyada oo la isticmaalayo kiciyaha kobaca. Waxay leedahay cilad dhexdhexaad ah cudurada fungal.
Inkasta oo canabku waxa loo tixgeliyaa in uu yahay dalagga aan qabin oo kori kara xaalado kala duwan, laakiin weli, waa qiimo dareenka xaqiiqda ah in duur this Wuxuu jecel yahay goobaha iftiinka iyo diiran, iyo,, sidoo kale, si xun u falceliyo qoyaanka ka badan ciidda. Dabcan, ee duurka, dalagga this sidoo kale ku koraa on saboolka ah, laakiin haddii aad rabto in la gaaro goosashada wanaagsan iyo nolol dheer for beertaada beertii, waxay noqon doontaa mid waxtar leh in lagu falanqeeyo ciidda ka hor beerto gooyn.
Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in la ogaado sida saxda ah ee qaabka aad ku doorteen, sababtoo ah qaybta macdanta waa mid aad u muhiim ah koritaanka tayada beerta canabka ah. Haddii ay dhacdo haddii ciidda ay ka kooban tahay dhoobo badanka dibna lakabka kale ee dheecaan ayaa loo baahan yahay, laakiin haddii beerta peat ay ku taallo goobta, ka dibna ciidda waa in lagu qasiqiyaa ciid. Goobaha ciidda xad-dhaafka ah waxaa loola dhaqmaa isku dhafka dhulka hoostiisa ama humus.
Waxay ubaahantahay in laga fogaado - kuwani waa milix cusbo iyo marshlands. Xaaladahaas oo kale, canabku way u dhintaan.
Waxaan qabannay ciidda, hadda waa waqtigii la dooran lahaa meesha beertii canabka ahayd waa la jari doonaa. Xulasho habboon waxay noqon kartaa isku dhafasho qabow oo u jeedda koonfur ama koonfur galbeed. Haddii aysan jirin doorasho noocan oo kale ah si loo beerto geedo, ka dibna dooro meel u dhow derbiga dhismaha.
Dhismaha dhuxulku wuxuu ka dhigi doonaa diirimaad si ay beertiisa canabka ah u koraan. Lama oggola in lagu beero duurka aagagga leh heer sare ah oo dhulka hoostiisa iyo hawo qabow qabow. Marka goob iyo meel lagu beero beertii canabka ah ee la go'aamiyey, waxaa looga baahan yahay in la diyaariyo dhulka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad qodo aagga muddo laba toddobaad ah ka hor inta aanay suurtagal ahayn, oo ciidda leh acidity xad dhaaf ah isku qasan lime (200g / 1kv.m Qodobka).
Tan iyo qayb ka mid ah canab ah "Aleshenkin" si xun u dulqaadanayo dhaxan, waxay u baahan tahay in la beeray on kaydka dhaxan u adkaysta iyo beeray guga, sidaas darteed geedka canabka ah wuxuu xoojin doonaa ku filan jiilaalka meel cusub iyo nidaamka xididka ee baadiyaha si fiican u koraan. Sidaas, waa hore u diiran, ciidda waa la kululeeyo oo la diyaariyey, meesha la doorto, waxaad awoodaan bilawga iyo beeritaanka duurka.
• Waxaan bilaabi doonaa diyaarinta godadka for gooyn, qiimaha lagu taliyey waa 85-85-85 cm;
• Waxaan ku shubi doonaa dheecaan dheecaan ka sameysan godka la kariyay, oo laga yaabo inay ka kooban tahay burburka, quraarada ama dhagaxyada yaryar. Dhumanka dhuuban ee caadiga ah waa 10 cm, laakiin waxay noqon kartaa wax badan haddii biyaha dhulka ku dhow yahay;
• Dhexda dhexe ee godka waxaan ku hagaajineynaa taageerada (xoojin ama xajin adag), iyo lakabka lakabka ee dhulka leh iyo lakabka bacrimin leh kala qaybso: saddex baaldiyo digir ah ama compost / 100 g of potassium salt / qoryo yar oo qoryo / qiyaastii 300 g oo ah superphosphates;
• si fiican u waraabi godadka dhulka;
• Waxaan dhulka u buuxinnaa si aan u buuxino 1/3 of hollows;
• hareeraha qashinka waxaannu samaynaynaa dhulka hareeraheeda oo dhejisid dhajinta;
• Waxaanu toosinaynaa xididada hoose ee xajmiga oo ka buuxi xagga sare ee dhulka si ay heerkulka tallaalka ama meesha laanta caleemaha ay ka sarreyso 3 cm ka sarraysa heerka carrada;
• Si taxadar leh, si aaney u waxyeeleynin xididada, dhulkaagana ku xajin gacmahaaga;
• mar kale biyo badan;
• Foornada ciidda leh peat ama humus.
Marka aad dooranaysid canab si beeritaanka, fiiro gaar ah u baadiyaha hal-ama laba-sano leh xididdada caafimaad leh, horumarsan iyo caleemaha ku filan baaluq. Ka hor inta beerto, gaabisaa xididada ugu muhiimsan ee hoose ee seedling ilaa 15 cm. Iyadoo la adeegsanayo xididada liidata farsamaynta dhulbeereedkataas oo suurtogal u ah in ay isticmaalaan dhamaan ciyaalka ee biqilka. Kala bedbeddel seedling laftiisa, sii daaya ilaa afar ka mid ah burooyinkeeda ugu weyn.
Ku rid geed baadiga loogu talagalay beeridda weel biyo ah. Tan iyo markii canabku "Aleshenkin" uma dulqaadanayo dhirta qaybta hoose ee baadiyaha, waxaa lagula talinayaa isaga inuu qodo jeexdin ilaa 50 cm qoto dheer. Sidaa darteed, qaybta dhulka hoostiisa ee canabkiisa iyo nidaamka xididka ayaa si fiican u dhisi doona mana qallajin doono xadiga xad dhaafka ah. Hubi in masaafada u dhexaysa dalaggu uu ahaa 1.5m, iyo masaafada u dhaxaysa saf canab - illaa 2m.
Haddii canabku ku dhex daro derbiga dhismaha, masaafada u dhexeysa derbiga ilaa seedka waxaa loo oggol yahay in ay ahaato qiyaastii 50 cm, iyada oo la bixinayo in biyuhu ka soo baxaan saqafka aan ku dhicin duurka. Iyada oo koritaanka canab, dhammaan caleemaha fuushan yihiin lagu xayeysiisay xayndaabka sameeyay.
Waqtiga beerashada ee canabka this waa ka wanaagsan inaad doorato guga. Waxa kaliya ee lagama maarmaan ah in la sugo dhulka dhulka ku yaal si uu u qalajiyo horeyna u kululeeyo. Koonfurta waxay ku saabsan tahay 15-kii Maajo, iyo waqooyiga, wax yar ka dib, dhammaadka May.
Si aad u hesho goosashada qani ku ah iyo duurka caafimaad leh ee canab, waxaa lagama maarmaan ah in la abaabulo daryeelka saxda ah ee geedka canabka ah. Waa kuwan soo socda:
1. Kala duwanaanshahan waa lagama maarmaanka u ah jiilaalka, sababtoo ah ma u dulqaadan dhirta;
2. waxay ubaahan tahay dalagga dalagga;
3. Wuxuu u baahan yahay difaac dheeraad ah oo ka dhan ah cudurrada fangas iyo cayayaanka;
4. Waxay doorbideysaa beeritaanka geedka fidida;
5. Wuxuu u baahan yahay manjooyin dheer ama mid dhexdhexaad ah;
6. Sida noocyo kale oo canab ah, waxay dalbanaysaa qoyaan ciid ah iyo quudin dheeraad ah.
Ka dib markii la beero, sapling wuxuu u baahan yahay waraabin fara badan si nidaamka xididku uu si dhakhso ah u qaato meel cusub. Marka tani dhacdo, qoyaan dheeraad ah looma baahna.
Iyada oo socodka xad dhaafka ah ee biyaha ee ciidda, berry on gacmuhu bilaabaan inay qarxaan, taas oo caqabad ku ah muuqaalka iyo qiimaha ganacsiga.
Waraabinta dhaadheer ee ugu dambaysa, oo loo yaqaano qoyaan-samaynta, ayaa la fuliyaa xilliga dayrta, ka dib goosashada, oo markaa diyaariya geedka canabka ah ee uumiga.
Si loo wanaajiyo helitaanka qoyaanka nidaamka xididka, grooves dhuuban ayaa la dhisi karaa, ka dibna qoyaanku kuma faafi doono baadiyaha. Haddii, intaa waxaa dheer, ka dib markii waraabka, ka dibna furo dhulka, tani waxay hagaajin doontaa helitaanka hawada iyo haynin qoyaan muddo dheer. Marka la jadwalayo waraabinta waa in ay ka warqabtaa sifooyinka noocaas ah:
• qoyaanka hawada iyo roobabka ee gobolka;
• celceliska heerkulka caadiga ah;
• Halabuurka macdanta ee ciidda goobta;
• Ku dhowaanshaha biyaha dhulka.
Iyadoo la tixgelinayo dhammaan sifooyinka, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in duurka ay ku beeri jireen ciidda qashinka lagu daro marar badan, iyo canabku sii kordhaya carrada dhoobada culus - marar badan iyo biyo badan.
Waa maxay mulching carrada lagama maarmaanka u ah iyo waa maxay? Haddii aad u baahatid
• Ka ilaali xididdada buunshaha ka soo dhaxaysa;
• Ka qayb qaadashada nafaqada wanaagsan ee geedka canabka ah;
• ku hayso qoyaan ku jira shucaaca nidaamka xididka;
• xakameyn ama si buuxda looga hortago koritaanka cawska;
• ku dhufto meesha uu geedku korayo, yareeyo cayayaanka carrada ku wareegsan;
• Ka hortagaan abuuritaanka qolofta cufan ee jirridda, sababtoo ah waxay hor istaagtaa helitaanka oksijiinta nidaamka xididka;
• Si loo ilaaliyo xididada iyo qaybta dhulka hoostiisa ee laga soo bilaabo xilliga qabowga daran, kadibna isticmaal habka mulching carrada.
Duufaan iyo pine paws, taas oo si fiican u ilaalisa soo qaboojinta, abuuritaanka wareegga hawada ee hoyga hoostiisa, kaas oo ka hortagaya bakteeriyada iyo caaryada on canab, waxaa loo isticmaali karaa mulch.
Sidoo kale, Bacriminta dabiiciga ah (digada beeraha, humus iyo compost) waxay ku haboon yihiin, siinta bacriminta dheeraadka ah ee xididdada dhirta inta lagu jiro xilliga jiilaalka, caleemaha dhacay (haddii aysan ku dhicin cayayaanka ama cudurada), cawska qallalan, qoyan, dhadday, caws iyo qalab kale . Qallajinta waa la isku dari karaa (oo ka kooban dhowr nooc oo qalab ah) iyo walxo.
• Aad bay muhiim u tahay inaad ogaato, mulching waxay leedahay dhinac xun ee xaaladaha qaarkood. Haddii aad dooranayso caws ama balka sida mulch, waa in horay loo soo saaro. Haddii kale, qadar badan oo karbohidraat ku jira ayaa kordhin doona qaadashada nitrogen ee carrada by microorganisms. Sidaas oo kale iyada oo laga fogeynayo nidaamka asaasiga ah ee arrintan lagama maarmaanka ah. Ku darida xaddiga dheeriga ah ee Bacriminta nitrogen ayaa sidoo kale ka caawin doonta kiiskan.
Beeraleyda aqoonta leh waxay doorbidaan inay isticmaalaan mulch sannadkii, sababtoo ah dusha sare ee ciidda ayaa si aad ah u soo gaadhay jawiga: isbeddelka heerkulka, qalajinta, barafka iyo roobka. Waa in la xusuustaa in marka ay kulushahay, mulch isku qoynayaan goobaha leh ciidda wareegga xargaha ku dhow, iyo marka diyaarinaya baadiyaha jiilaalka, waxay ku habboon tahay lakabka ugu sareeya ee ciidda, sidaas darteed hagaajiya nafaqada nidaamka xididka.
• Sababtoo ah faa'iidada ugu weyn ee mulching waa in laga hortago qalajinta ee dusha ciiddaTani waxay ka dhigan tahay in aan lagugula talin inaad isticmaasho habka beeraha ee carrada xad-dhaafka ah. Isticmaalku si gaar ah ayuu ugu wanaagsan yahay meelo aad u qallalan, iyo sidoo kale carrada carrada iyo ciidda leh.
Si looga fogaado dhaawaca dhaxan ee geedka canabka ah, waa in la daboolaa. Maaddooyinka kala duwan waxay ku habboon yihiin ujeedooyinkan: Dharka gaboobay, shimbiraha, dhulka, balka, cirbadaha, iwm. Doorashada ugu wanaagsan ee hoyga waa geed iyo labbo timireed, kaas oo bixiya wareegga hawada oo bilaash ah, taas oo aan ku keenayn canab iyo isla waqti si fiican u kulul baadiyaha.
Gooyo geedka canabka ah ee kala duwan ee canabka ee la tixgeliyey waa in la fuliyaa dherer ah 8-10 burooyinkeeda, mararka qaarkood manjooyin celcelis ah ee caleemaha by 5-6 burooyinkeeda loo ogol yahay. Tan iyo noocyada canabka this midho waa mid aad u fiican, waa in ay ku xiran tahay raashin. Waayo, dhammaan caleemaha daciifka ah iyo caleemaha mataankoodu waa la jaraa.
Bacriminta ugu badan ee loo isticmaalo noocyada kala duwan ee macdanta ayaa ah macdan (cusbo potash iyo superphosphate) iyo organic (qorax qoryo, compost iyo humus). Natiijada ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in lagu quudiyo Bacriminta dareeraha ah inta lagu jiro waraabka. Waxaad isticmaali kartaa canabkiinna iyo xididdada cagaaran.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan canab ugudambaysta ugu wanaagsan
Tan iyo markii canabku "Aleshenkin" uu leeyahay iska caabin yar oo cudurro fungal ah, waxay u baahan tahay daaweyn labalaab leh wakiilada nidaamka. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad u dooran kartaa amaan bini-aadanka, diyaarinta nafleyda ee cayayaanka, iyo kiimikada - sunta cayayaanka. Faa'idada ugu horeysay waa baahida loo qabo isticmaalka toddobaadlaha ah, iyo sidoo kale soo noqnoqoshada geedi socodka geedka canabka ah ka dib roobab, taas oo dhaqaale ahaan qaali ah iyo waqti qaadashada. Dhibaatada labaad waxay saameyn xun ku leedahay jidhka bini'aadamka. Si loo yareeyo heerka suntan, waa in la isticmaalo diyaarinta dufan-yar (IV degree) ee lagu buufiyo. Qaar badan oo beeralayda khibrad leh waxay isticmaalaan xal lime si ay u ilaaliyaan duurka.